Xulka Somalia oo ka qaybgelaya Koobka Futsal-ka Carabta oo galabta dheelaya kulankii 1-aad (Tafaasiil) | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Xulka Somalia oo ka qaybgelaya Koobka Futsal-ka Carabta oo galabta dheelaya kulankii...
Xulka Somalia oo ka qaybgelaya Koobka Futsal-ka Carabta oo galabta dheelaya kulankii 1-aad (Tafaasiil)
(Dammaam) 20 Juun 2022 – Dalka Sacuudiga Carbeed ayaa martigelinaya koobkii lixaad ee Tartanka Futsal Cup ee Carabta 2022, kaasoo maanta ka furmaya magaalada Dammaam ee dalkaasi, isagoo socon doona Juun 20-28.
Waxaa tartankan ka qaybgelaya 10 xul oo uu dalkeennu ka mid yahay kuwaas oo kala ah: Morocco, “koobka haysata”, Masar, Kuwait, Algeria, Iraq, Falastiin, Mauritania, Soomaaliya, Liibiya, marka laga soo tago Sacuudi Carabiya, martigeliyaha.
Dalkeenna Somalia ayaa ku jira guruubka qura ee 4 xul ka kooban, halka labada guruub ee kale ay min 3 dal ku jiraan.
Somalia ayaa ku guruub ah dalalka Marooko, Muritaaniya iyo Kuwayt, waxayna kulanka 1-aad galabta saacaddu marka ay tahay 16:30 la ciyaaraysaa xulka Muritaaniya.
Previous articleDadka la siiyo sharciga KMG ah ee deganaanshaha Sweden oo la qiray inay dhibaato haysato
Next articleMW Puntland oo ”kashifay” arrin kale oo uu markii ugu horreeysey soo bandhigay & mid uu ku faanay